အဏ္ဏဝါမှ ကျွန်တော့်အတွက် ကဗျာလက်ဆောင်...! | အိမ်လွမ်းသူ...
အကိုကြီး အဏ္ဏဝါ မှ ကျွန်တော့်အတွက် နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်စေရန် လက်ဆောင်အဖြစ် ရေးပေးထားသော ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ...!သူငယ်ချင်းတို့လည်း ခံစားလို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ...!အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှု့အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေ...!
လုံးသည် ပြားသည် သူမသိပဲ
ဝါသနားကို အခြေခံ၍ ပညာရှင်မဟုတ်
"အောင်အောင်..." တစ်ယောက် သူ့ BLOG အမည်
တစ်နေ့တစ်နေ့ BLOG ပေါ်တက်
လာရောက်မွှေနှောက် လိုသည့် SOFTWARE
လာရောက်ဝင်လည် COMMENT ပေးလည်း
"အိမ်လွမ်းသူ.."မှ "အောင်အောင်.." ပါ...။
7 Response to အဏ္ဏဝါမှ ကျွန်တော့်အတွက် ကဗျာလက်ဆောင်...!
အခုလိုပဲ အိမ်လွမ်းရင်းနဲ့ software တွေ အများကြီး share ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကိုအိမ်လွမ်းသူရေ....:)
ကွန်ပြုတာက အလုံးလည်းဟုတ်ဝူး အပြားလည်းဟုတ်ဝူး
စိတ်ဓါတ်လေးတွေ သိရပြီမို့ နောက်ဆိုရင်
လိုအပ်တာမှန်သမျှ သူငယ်ချင်းစီပဲ လာရှာခိုင်းတော့မယ် ;p ;p ;p
ငါ့ညီလေး ဘ၀လေးကို ရေးချထားသလို အသက်ဝင်တယ်ဟေ့။ကဗျာဆရာရေ ကဗျာလေးအတွက် အောင်အောင့် ကိုယ်စား ကျေးဇူးပါ။
ကဗျာရေးတတ်သူကလည်း ရေးတတ်ပါ့။ နာမည်လေးပါ ထည့်ထည့်ရေးတော့ ကြော်ငြာစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။